Leicester City Oo Taallo U Dhisaysa Mulkiilihii Diyaaraddu La Dhacday Ee Vichai Srivaddhanaprabha | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Leicester City Oo Taallo U Dhisaysa Mulkiilihii Diyaaraddu La Dhacday Ee Vichai Srivaddhanaprabha
(10-11-2018) Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa gudaha garoonkeeda King Power taallo uga dhisaysa mulkiilaheedii ku geeriyooday shilka diyaaradda bishii hore, shilkaas oo ay kula geeriyoodeen afar qof oo ay ku jirtay gabadh ku guuleysatay quruxda dalka Thailand oo la shaqaynaysay.
Shilkan oo xayndaabka King Power Stadium ka dhacay 27 October ayaa waxa ku geeriyooday Vichai Srivaddhanaprabha daqiiqad kaddib markii ay diyaaraddu kala kacday garoonka dhexdiisa, waxaana geeridiisu sababtay toddobaad murugo ah oo kooxdana ka baajisay hal ciyaar oo dib loogu dhigay dhamaadka bishan November.
Wiilka uu dhalay Vichai Srivaddhanaprabha oo lagu magacaabo Aiyawatt ayaa ku dhawaaqay in garoonka laga dhisi doono taallo lagu xasuusanayo aabbihii.
“Ma awoodi doono inaanu ku abaal-marino wixii uu noo qabtay, aniga oo inankiisii ah, qoyskiisa ahaan iyo qof kasta oo ku xidhan Leicester City, waxaanuse ku sharfaynaa xasuus iyo inaanu kor u qaadno wixii uu ka tegay. Waa inaanu soo wadno horumarinta kooxda, inaanu dib u naqshadayno garoonka tababarka iyo qorshihii ahaa in la ballaadhiyo garoonka oo ah inaanu rumayno aragtidiisii.” Sidaas ayuu yidhi Aiyawatt oo uu dhalay Vichai Srivaddhanaprabha.
Cayaarta Burnley ayaa waxay Leicester City ku lebbisan doontaa dhar uu ku qoran yahay magaca mulkiilahoodii geeriyooday, waxaana loo aamusi doonaa daqiiqad ka hor inta aanay bilaabmin ciyaartu.